समर लभ माथि बन्ने भयो चलचित्र साय र अतितको भूमिकामा को ? – Halkaro
समर लभ माथि बन्ने भयो चलचित्र साय र अतितको भूमिकामा को ?
काठमाडौँ । सुविन भट्टराइको कृति ‘समर लभ’ माथि चलचित्र बन्ने भएको छ । लामो समयको अध्यायन अनुसन्धान पछि चलचित्र निर्माण तयारी गरिएको छ ।
आइतबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा चलचित्र घोषण भयो । भरत शर्मा, सपन सरकार, इन्दु भण्डारी र मनु विकले चलचित्रमा लगानी गर्ने भएका छन् ।
कार्यक्रममा चलचित्रको मुख्य पात्र अर्थात पुस्तकको मुख्य पात्र ‘साया’ र ‘अतित’ समेत सार्वजनिक गरेको छ ।
चलचित्रमा ‘अतित’को भूमिका बिभिन्न बिज्ञापन चलचित्रमा देखिएका मोडल आशिष पिया र ‘साया’को भूमिकामा सौदर्य प्रतियोगीताको बिजेता रेवती क्षेत्री देखिने भएका छन् । यी दुबैको यो चलचित्र अभिनय पहिलो हो । सन् २०१६ की मिस यूनिभर्सिटी रेवती मिस इन्टरनेसनल भारतकी उपाधी विजेता पनि हुन् ।
रेवतीले ‘ग्याङ्स अफ नर्थवेष्ट’ नामक भारतीय चलचित्रमा समेत काम गरेकी छन् । अन्य चलचित्र छनौटको क्रममा रहेको निर्माण पक्षले जनाएको छ । चलचित्रलाई मुस्कान ढकालले निर्देशन गर्दैछन् । मुस्कानसँग थुप्रै चलचित्रमा मुख्य सहायक भएर काम गरेको अनुभव छ । कथा माथी पत्रकार समेत रहेका सामिप्यराज तिमिल्सिनाले पटकथा तयार पारेका छन् ।
रेवतीले कृति ‘समर लभ’ पढेपछि आफू चलचित्रमा काम गर्न रेडी भएको बताइन् । कार्यक्रममा पटकथा लेखक सामिप्यराज तिमिल्सिनाले आफूहरुले पुस्तकको पात्र अनुसार चलचित्रको पात्र छनोट गर्न नसकेको स्विकार गरे ।
निर्देशक मुस्कान ढकालले पुस्तक पढ्ने दर्शकलाई निराश नबनाई उत्कृष्ट चलचित्र बनाउने बताए । पुस्तकका लेखक सुविन भट्टराइले आफूले पुस्तक लेख्दा नै चलचित्र हेरेजस्तो लाग्ने गरि लेखेको बताउदै पुस्तकले बनाएको क्रेजलाई चलचित्रले अझ बढावा दिनु पर्ने बताए ।
← कञ्चनपुर घटनाको निष्पक्ष छानविन गर्न भाजपा नेताको माग
२८ देशका एक हजार २४ सेना पाँचखालमा अभ्यास गर्दै →